Vanorarama neHurema Vokurudzira Kusainwa kweChisungo cheKodzero Dzavo
Chivabvu 29, 2013
HARARE — Vanhu vanorarama nehurema munyika vanoti vari kufara kuti dare reHouse of Assembly rakabvuma kuti Zimbabwe itambire zviri pamutemo chisungo chesangano repasi rese, che United Nations Convention on the Rights of People with Disabilities. Chisungo ichi chinosungira kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu vanorarama nehurema.
Mukuru musangano remubatanidzwa wemasangano evanorarama nehurema, reNational Association of Societies for the Care of the Handicapped, NASCOH, VaFarai Mukuta, vanoti dare reseneti rinofanira kutambira chisungo ichi kuitira kuti chisaimwe nemutungamiri wenyika, kuitira kuti chitange kushanda.
VaMukuta vanoti chisungo ichi chakanaka chose uye chinosungira kuti hurumende iise mari mumabasa ekusimudzira vane hurema mungave munyaya dzedzidzo, hutano, magariro avo, nezvimwe zvinoita kuti hupenyu hwavo husaome.
Vanoti pari zvino vane hurema vari kutambura nekuti mutemo weDisabled Persons Act, hausi kutevedzwa.
VaMasimba Kuchera, avo vanomirira sangano reCentre for Disability and Develeopment, vanoti kunyange hazvo paramende yakanonoka kutambira chisungo ichi, vanofara nekutambirwa kwechisungo ichi svondo rapfuura.
VaKuchera vanoti chisungo ichi chinoita kuti vane hurema munyika vabatsirikane nezvirongwa zvinenge zvichiitwa neUnited Nations.
Vachikumbira kuti nhengo dzedare reHouse of Assembly dzitambire chisungo ichi, gurukota rinoona nezvemabasa nekugara zvakanaka kwevanhu. Amai Paulina Mpariwa Gwanyanya, vakati zvakakosha kuti hurumende ichatange kutevedza chisungo ichi.
Zimbabwe ndiyo nyika yekutanga muAfrica kuve nemutemo unoona nezvevanorarama nehurema, uyo wakadzikwa muna 1992, uye inyika yechipiri pasi rese mushure meAmerica kuve nemutemo wakadai.
VaMukuta vanoti zvinosuwisa chose kuti vane hurema, zvikurusei vanoshandisa ma wheelchair, vari kuramba vachizvibatsira mumakwenzi kumaruwa sezvo zvimbuzi zvese munzvimbi idzi zvisangapinde ma wheelchair.
VaMukuta vanoti sangano ravo rakatokwidza chikumbiro kumapazi ehurumende anoona nezvekuvakwa kwedzimba, nenzvimbo dzinoshandira veruzhinji pamwe nemakanzuru ese munyika kuti asungirwe kuti zvivakwa zvose zvinge zvichishandiswa nyore nevanorarama nehurema.
Sangano reNASCOH mubatanidzwa wemasangano makumi manomwe, uye rinogara richikurudzira hurumende kuti ibvume kushandisa chisungo che United Nations ichi.